Degdeg:- Dhaqaalaha Somalia oo kor ukacaya sanadkaan sida ay sheegtay World Bank. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeSoomaliyaDegdeg:- Dhaqaalaha Somalia oo kor ukacaya sanadkaan sida ay sheegtay World Bank.
Degdeg:- Dhaqaalaha Somalia oo kor ukacaya sanadkaan sida ay sheegtay World Bank.
September 10, 2019 marqaan Soomaliya, Wararka maanta 1
Qimiintan ayaa ah mid guul u ah
Somaalia haday sas ku sii socoto
Daawo:- Goalkii geerida ee quusiyay ciyaartooyda qarankeena “Somalia vs Zimbabwe”.
DAAWO VIDEO:Faysal Cali Waraabe oo Caruur Yar Yar Darood Nacaybka ka Dhaadhacinaya Iyo Nacaybka Soomaali Weyn.
Waxaa la dhihi karaa dhaqaalaha dalka waxaa korinaya ganacsiyada gaarka ah oo aad u shidan. Waxaana la dhihi karaa dhaqaale heer qaran ah ma jiro sababtoo ah heerkaas wax walba weli waa ka qabyo dalkuna ma lahan wax soo saar dawladdu maareeyso. Taasu micnaheedu waa inuu shicibku ka dadaal badan yahay dawladaha dalka ka jira oo bangiga dhexe looga baahan yahay inuu sidaas ku amaano oo ku dhiira galiyo.